बोतलमा लेखिएको एक शब्दले बचायो पुरै परिवारको ज्यान ! – ताजा समाचार
बोतलमा लेखिएको एक शब्दले बचायो पुरै परिवारको ज्यान !
एजेन्सी, २६ भदौ । सुन्दा कुनै दन्त्य कथा जस्तो लाग्ने घटना अमेरिकामा घटेको छ । जहाँ एउटा परिवारका सम्पूर्ण सदस्यको ज्यान बोत्तलमा लेखिएको एउटा ‘शब्द’का कारण जोगिएको छ । तीब्र बहाव भएको एउटा झरनामा फसेको परिवार बोत्तलमा लेखिएको सन्देशका कारण जोगिएको हो । झरनामा फ सेका परिवारका सदस्यहरुले बोत्तलमा एउटा शब्द लेखेर फोलेका थिए । सन्देश लेखिएको बोत्तल झरनाको तल नदीमा तैरिरहेको फेला पर्यो । बोत्तल फेला पार्ने व्यक्तिको मद्दतबाट सम्पूर्ण परिवारको उद्दार भएको सीएनएनले जनाएको छ ।
समाचारमा बताइएअनुसार कर्टिस ह्विटसन, उनकी गर्लफ्रेन्ड र १३ वर्षको छोरा जुन महिनामा मध्य क्यालिफोर्निया गएका थिए । उनीहरु एउटा उपत्यका हुँदै अरोयो सेको नदी र त्यहाँबाट झरनासम्म जान चाहन्थे । तर, तेस्रो दिन उनीहरु एउटा यस्तो क्षेत्रमा फसे, जहाँ चारैतिर ४० फिट उच्चो पर्खाल थियो ।
त्यसपछि उनीहरुले आफूसँग भएको एउटा ‘अर्डर स्लिप’ कागजमा एउटा सन्देश लेखेर पानीमा बगाउने निर्णय गरे । अर्डर स्लिपमा ‘हेल्प’ (हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्) भन्ने सन्देश लेखेर उक्त स्लिप हरियो रंगको बोत्तल भित्र राखेर बगाइदिए । उनीहरु फेसको करिब ४०० मिटर तल बोत्तलमा लेखिएको उक्त सन्देश २ जना हाइकर्सले फेला पारे ।
हाइकर्सहरुले उक्त सन्देशसहित बोत्तल फेला पारेपछि उद्दारकर्ताहरुलाई खबर गरे । हाइकर्सहरु उद्दारकर्तालाई लिएर कार्टिसको परिवार फसेको ठाउँमा पुगे । जुन १५ तारिखको राति केही घण्टाको प्रयास पछि उद्दारकर्ताहरुले कार्टिस परिवारका सबै सदस्यको सकसुल उद्दार गरे ।